Malunga nathi - Jiangxi Lotte Iimpahla Co., Ltd.
Emva kweminyaka yophuhliso, umzi-mveliso wenze inkqubo engqongqo yemveliso kunye nenkqubo yolawulo lomgangatho olungqongqo. Ngokuthe ngcembe watsala umdla weempawu zempahla edumileyo, njenge-CLOUD-NINE, DISNEY, JBS WEAR, FOREVER COLLECTIONS, H & M njl. Uhlobo oluphambili lwengubo yamadoda yokugubungela ijezi ezinithiweyo, iihempe, ii-T-shirts, iPolo, iblukhwe eqhelekileyo, iimpahla zokulala, iiPijama, iimpahla zempahla, njl.
Kwiminyaka yakutshanje, ukulungiselela ukwenziwa kweempawu zamazwe aphesheya, iLOTTE Ingubo ikwagxile kwaye yasekwa uyilo loyilo. kunye nokuthengisa dept., Kwaye kwasekwa iimveliso ezimbini ezizezakho kunye neziphezulu ezifana noJONN CABOT kunye noJean CABOT. Oku ayiphuculi ubuchule kunye nenqanaba lenkonzo yokuqhubekeka, kodwa ikwakhuthaza iR & D kunye namandla okuthengisa kumzi mveliso.
Kwiminyaka ezayo, esekwe kwimigaqo yolawulo lokunyaniseka, umgangatho wokuqala, iindleko ezingabizi, iLOTTE Ingubo iya kuba kwindlela yokuba yinkampani ekumgangatho weenkonzo.
Ngokusekwe kumava eminyaka engama-23 kulawulo lwefektri kunye nokulungiswa kwengubo, sinako ukuphatha naziphi na iintlobo zokulungiswa kokunxiba kwamadoda. Ngeli xesha, sinesebe lethu loyilo, sinokulungiswa kweempahla ngokwesicelo somthengi okanye sincede umxhasi ekuphuculeni uyilo lwemveliso. Siza kukunika eyona ilungileyo!